U dir farriimaha qoraalka kumbuyuutarkaaga Pushbullet | Androidsis
Hadda waxaad farriimaha qoraalka ah ka soo diri kartaa kombuyuutarkaaga adigoo adeegsanaya PushBullet taleefanka
Pushbullet ayaa la dhigay in meel aad u cajiib ah ay sabab u tahay shaqeynta weyn in ay bixiso iyo in si fiican loo rakibay baahida dadka isticmaala.
Haddii aan horeyba ugu faraxsanahay waxa Pushbullet na siinayo, ilaa shalay ayaa sheeko cusub oo aad u xiiso badan lagu dari karaa, sida suurtagalnimada in u soo dir farriimaha qoraalka kombiyuutarkaaga taleefanka. Waxqabadka cusub oo awood badan siin doona barnaamijkan cajiibka ah ee loogu talagalay Android.
1 Fariimaha SMS-ga ee kombiyuutarkaaga
1.1 Si buuxda wax u fududee
2 Laakiin maxaa loogu talagalay Pushbullet?
Fariimaha SMS-ga ee kombiyuutarkaaga
Tallaabadan waa mid aad u fudud in la sameeyo. Waxa ugu horeeya ayaa ah barnaamijku ha ku rakibnaado Android iyo kordhinta biraawsarkaDhagsii tabta SMS ka dibna dooro qofka ama lambarka aad rabto inaad u dirto qoraalka, qor farriinta aad rabto inaad dirto oo guji dir ama dir. Aad u fudud.
Qoraalka waxaa lagu soo diri doonaa taleefankaaga Android, oo macnaheedu yahay inuu ka imaan doono lambarkaaga taleefanka dhabta ah iyo wuxuu ku bari doonaa wada hadalka taleefanka. Tayo weyn oo u oggolaaneysa adeegsadaha inuu ka jawaabo SMS isla kombiyuutarka kumbuyuutarka ama kumbuyuutar laptop ah, ha ku hoos jiraan Windows, Mac, Linux ama Chromebook.
Si buuxda wax u fududee
Isla mar ahaantaana in kooxda horumarinta Pushbullet ay bilaabeen shaqadan cusub, autocomplete ayaa isla wakhtigaas yimaada si markaa marka la qoro xarfaha ama tirooyinka ugu horreeya ee xiriir lala yeesho, si toos ah ayaa loo soo xulan karaa, iyadoo wax laga fududeynayo macnahaas.
Iyo haddii sabab kasta ha noqotee aadan rabin inaad muuqaalkan firfircoonato waa laga nusqaamin karaa dejinta app-ka Android ka ah qaybta asturnaanta «Isku buuxinta xiriirada SMS».
Laakiin maxaa loogu talagalay Pushbullet?
Pushbullet wuxuu mas'uul ka yahay bilaabida dhammaan noocyada feylasha, farriimaha, xiriiriyeyaasha, sawirrada ama waxyaabo kale oo nooc ah oo taleefanka looga soo diro kombuyuutarka iyo dhinaca kale, ama qalab kasta oo aad haysato. Mid kale oo ka mid ah astaamaheeda ayaa ah suurtagalnimada awood u yeelan kartaa inaad iska qorto kanaallada inaad hesho dhammaan noocyada kala duwan. Waxa kale oo ay u adeegtaa in la helo dhammaan ogeysiisyada taleefanka gaadha si ay ugu muuqdaan kumbuyuutarka.
Sida ugu fudud ee lagu galo hal mar oo keliya, si ku rakib barnaamijka dhammaan qalabka si toos ah loogu diro loona helo faylasha, sida kor ku xusan. Pushbullet wuxuu noqday mid ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee loogu talagalay Android sanadkan waana mid ka mid ah barnaamijyadan muhiimka ah iyo fidinta ay tahay in isticmaale kasta uu ku rakibo qalabkooda iyo sidoo kale kombuyutarkooda. Muhiim u ah howlaha maalinlaha ah.
Waxa kaliya ee haray ayaa ah barnaamijyo badan oo lagu taageerayo Pushbullet, maadaama, tusaale ahaan, Ogeysiisyada WhatsApp waxay gaarayaan kumbuyuutarka, laakiin kama jawaabi kartid farriimaha ka soo baxa. Way awoodaa ku samee xididka, laakiin dhammaan isticmaaleyaashu ma maraan mudnaantaas. Waxay noqon doontaa arrin in yar la sugo iyo in barnaamijyo badan, sida Line lafteeda, ay taageero u fidiyaan barnaamijkan cajiibka ah ee loo yaqaan Pushbullet.
Pushbullet: SMS kumbuyuutarka ah iyo wax ka badan
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Hadda waxaad farriimaha qoraalka ah ka soo diri kartaa kombuyuutarkaaga adigoo adeegsanaya PushBullet taleefanka
Laba siyaabood oo looga gudbo baaritaanka labada jeer ee WhatsApp si aysan u ogaanin inaad durba akhrisay farriimaha soo socda